Mon Mon's Diary: Singapore ရဲ့အိမ်သူကြီးတာဝန်
လူမရတော့ ဘယ်သူက ပိုက်ဆံပေးတုန်း။ တခန်းလုံးစာလွတ်ရင် အီနေတာပဲ။ တခါတလေ ၄,၅လ ပဲ။
အင်းးးးးး......ဘယ့်နှာကြီးတုန်း။ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း အမြတ်ကြီးစားခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက် တာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေရင် ပြီးတာပါပဲ။ စာတွေကို အရောင်မပါဘဲ ရေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းလိမ့် မယ် ထင်ပါတယ်။ တော်ကြာ အိမ်မှာ နွားတွေ ထားစရာမရှိမှာ စိုးလို့။
လာနေချင်တဲ့သူတွေမှပုံနေတာပဲ။ comments ထားခဲ့တဲ့သူတွေက except avacado မှလွှဲပြီး ကျန်တာ ပြောတာတွေကမှန်နေလို့ဖြစ်မယ်။ sg မှာ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ကဒီလိုချည်းပဲ။ တချို့ဆို ကိုယ်အိမ်ခန်းခ၊ PUB ဖိုးတောင်ပေးစရာမလိုဘူး။ အဲဒီကနေပဲ အမြတ်ထွက်နေကြတာ။ အမှန်ကိုပြောတာ နာစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်မဟုတ်ရင်ပြီးတာပဲလေ။ ဘယ်သူဘာပြောပြော ဂရုစိုက်နေစရာမှ မလိုတာ။ မဟုတ်ဘူးလား :P
I like your blog very much. Cheers Ma Mon :-)
မွန်ရေ.. မြူးလည်း အိမ်သူကြီးပဲ.. အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကို ထမင်းဟင်းပါချက်ကျွေးတဲ့ အိမ်သူကြီးပေါ့.. သန့်ရှင်းရေးလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်လိုက်တယ်.. နေကြသူတွေက သူငယ်ချင်းတွေချည်းပဲဆိုတော့ အဆင်ပြေပြေပါပဲ.. မသိတတ်တဲ့သူပါရင်တော့ စိတ်ညစ်ရမယ်ထင်တယ်.. ခုထိတော့ မကြုံဖူးသေးဘူး..
Cheer!! love ur post...